Jaketị friza → Akwa maka ime ụlọ oyi • Ihe mkpuchi kọmputa P&M
Jaketị friza jaket
Ngwaọrụ ndị ọrụ friza Jaketị elu-mma, nchekwa, raara onwe ya nye ịrụ ọrụ na obere okpomọkụ bụ okwu dị ezigbo mkpa maka ndị were ọrụ. Họrọ ezigbo ihe nlereanya bụ nnọọ ihe ịma akakarịsịa ma ọ bụrụ na anaghị enye iwu ngwaahịa ndị a ugboro ugboro.
N'ime ụlọ ahịa anyị, anyị na-enye ụdị kachasị mma kachasị mma site na ndị nrụpụta a pụrụ ịtụkwasị obi gụnyere ịmepụta uwe pụrụ iche.
Hi-Glo 25 jaket Coldstore, nchebe ruo -64,2 Celsius
Jaketị friza Modelsdị ndị a dị iche iche dị iche iche, ihe dị iche na ibe ha bụ imewe, ọnụahịa na ebumnuche. N'ihi otu ebumnuche nke ịkwa akwa ha, a na-eji ihe ndị dị mma dị mma na njedebe zuru oke.
Ihe a niile iji kpuchido onye ọrụ ahụ ma jee ozi ruo ọtụtụ afọ. Otu ụdị ndị kachasị ewu ewu bụ jaket Hi-Glo 25 Coldstore na-enye nchebe ruo -64,2 Celsius C (eserese), kwadebere ya nke oge a, usoro 5-oyi akwa, nke edobere iji mata ọtụtụ ikuku.
Jaket ahụ a kpọtụrụ aha na-ezute ọkọlọtọ EN342, nke na-eme ka o kwe omume iji ya n'ụlọ nkwakọba ihe nwere okpomọkụ ruo -64,2 Celsius C. Agbanyeghị, ụdị jaket ahụ anyị na-enye, nke na-echekwa nke kachasị, na-echekwa na ọnọdụ ọrụ ruo -83,3 Celsius C maka 1 awa na-arụ ọrụ ọkara, na gbadaa -44,01 Celsius C maka elekere 8 na-arụ ọrụ ọkara.
Valueskpụrụ ndị a na-emetụta ma ọ bụrụ na jaketị na traụza Hi-Glo 40 dungarees na-eyi ọnụ.
Coldstore CS-10 friza jaket, nchebe ruo -25 ogo C.
Nchebe zuru oke
Ndị na-emepụta anyị lekwasịrị anya kacha mma kacha mma na oke zuru oke. Uwe ndị kwekọrọ n'ụkpụrụ EN 342 na-enye nchebe dị mma pụọ ​​na oke okpomọkụ. A na-arụ ọrụ n'ime gburugburu oyi site na ọnọdụ okpomọkụ dịka ma ọ bụ karịa karịa -5 ℃. Ọ dị mkpa ka ị ghara ikwe ka uwe ahụ mee mmiri - mmiri ma ọ bụ idei mmiri nwere ike ịnwe nsonaazụ na-adịghị mma.
Jaketị friza dị na nha dịgasị iche na-egosi na ị nwere ike ịchọta uwe dị gị mma n'ụzọ zuru oke. Zụta akwa akwa bụ ego bara uru. Gbaso ndụmọdụ ndị nrụpụta ahụ, ọ ga-arụ ọrụ ebumnuche ọtụtụ afọ, nke ndị nwe nnukwu ụlọ ọrụ na ndị ọrụ ahụ gosipụtara n'onwe ha.
Jaket friza Allegroallegro kutrka frizakurtkaUwe mkpuchi oyijaket maka obere okpomọkụUwe mkpuchi Hi-Glo - ogo 40jaket nchekwajaket na-eche echiche maka ime ụlọ oyijaket mkpuchi mkpuchi okpomọkụjaket a gbaara ezi àmàfriza Jaketịfriza Jaketị